नीतिले राजनीतिक दललाई निर्देश गर्ने दिन कहिले आउला ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / नीतिले राजनीतिक दललाई निर्देश गर्ने दिन कहिले आउला ?
नीतिले राजनीतिक दललाई निर्देश गर्ने दिन कहिले आउला ?
Posted by: युगबोध in विचार October 10, 2018	0 141 Views
नीति शब्दको शाब्दिक अर्थ लगाउदा सरकार सञ्चालन गनेर् आधारभूत सिद्धान्त वा उद्दे श्य, सरकारी तथा गै रसरकारी संघसंस्थालाई व्यवस् िथत रुपमा चलाउने ऐ न कानून भन्ने बुझिन्छ । अकोर् शब्दमा भन्नुपर्दा जुनसुकै कामकाज गर्दा अवलम्बन गर्नुपनेर् नियम विनियम, विवे कशील शुद्ध आचरण, कार्यप्रणालीगत पद्धति, बुद्धिमत्तायुक्तढंगले समझदारीपूर्वक लै जाने भाव तथा प्रक्रियालाई जनाउछ ।
सार्वजनिकरुपमा नीतिलाई अथ्र्याउ“दा सरकारले निर्धारण गरे को कार्यको समष्टिगत स् वरुप, राज्यले अख्तियार गनेर् नीति, सरकारले सञ्चालन गनेर् विभिन्न कार्यहरुको निदेर् शन, सरकारी कामकारवाहीको मार्गदर्शन, शासन सञ्चालनका विभिन्न कार्यहरु पर्दछन् । राज्य सञ्चालन गर्न निदेर् शन गनेर् आधारभूत सिद्धान्त वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ । अकोर् शब्दमा भन्नुपर्दा सरकारले के गनेर् वा के नगनेर् भन्ने सम्बन्धमा गरिएको छनो ट नै सार्वजनिक नीति हो  । सार्वजनिक नीति विस्तृत, उद्दे श्यमूलक तथा नतिजामूलक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको सरकारको कार्यशै ली तथा राज्य सञ्चालनका अवस् थाहरु सार्वजनिक नीतिबाट निदेर् शित हुन्छन् ।
मुलुककी शासन ब्यवस् था परिचालन, राजनीतिक दलस“गसम्बन्धित राज्य सत्ताको अवस् था वा खो जी, राज्यको नीति, मुलुकको ब्यवस् था, अन्य राष्ट्रस“गको कूटनीतिक सम्बन्ध, सरकारको निश्चित नीति तथा सिद्धान्त र व्यवहारगत ब्यवस् थाको समग्र स् वरुपलाई राजनीति भनिन्छ । राजनीति कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको नै तिक जिम्मे वारी हो  ।
राजनीति शब्दको अर्थको आधारमा परिभाषित गरे को पाइन्छ । राजनीतिशास् त्रका विद्वानहरुले आ आफ्नो विचारलाई फरक–फरकढंगले परिभाषित गरे का छन् । कतिपय विद्वानको राजनीतिक दृष्टिको ण व्यापक र के ही विद्वानले संकुचित विचार राख्दै परिभाषित गरे को पनि पाइन्छ । विद्वान डे विट स् टनले राजनीतिको परिभाषा दिदै भन्दछन्– राजनीति कुनै पनि समाजका अन्तरक्रियाहरुको त्यस् तो बहुपक्षीय अवस् था हो जसले आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गदैर् शान्तिपूर्णढंगले ससम्मान पूर्वक लागु गर्न सक्छ । राजनीतिशास् त्रका अर्का विद्वान बि.पावे लले राजनीतिको परिभाषा दिदै कुनै पनि स् वतन्त्र समाजमा बै ध वा कानुनी शक्तिको प्रयो ग वा प्रयो गको डर धाक दे खाई संगठन अनुकूलको कार्य गनेर् अन्तरक्रियाको सामूहिक नामलाई राजनीति भन्दछन् । दुबै जना विद्वानले ब्यक्त विचार अध्ययन गर्दा राजनीतिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा मुलुकको सरकार सञ्चालनस“ग सम्बन्ध राख्छ । कुनै पनि लो कतान्त्रिक मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मे वारी राजनीतिक दहहरुमा निहीत हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो दललाई सरकारमा पु¥याउनका लागि सार्वभौ मसत्तासम्पन्न जनता समक्ष प्रतिबद्धता पत्रको माध्यमबाट आफ्ना अवधारणहरु गहकिलो रुपमा प्रस् तुत गनेर् प्रयास गरे का हुन्छन् । तथापि प्रतिबद्धतापत्र अनुसार कार्य सञ्चालन भएको दे खिदै न ।
स् वतन्त्र सार्वभौ म लो कतन्त्रात्मक मुलुकको सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न आन्तरिक तथा वाह्य स्रो तको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आन्तरिक स्रो तमा संविधान तथा संविधान प्रदत्त प्रावधानहरु, मुलुकमा क्रियाशील ऐ न कानूनहरु, सनातन परमपरागतरुपमा चलिआएका रीतिरिवाज, सार्वभौ मसत्तासम्पन्न जनताले समय–समयमा ब्यक्त गरे का अभिब्यक्तिहरुलाई लिन सकिन्छ । यसै गरी वाह्य स्रो तमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौ ताहरु, घो षणापत्र आदि पर्दछन् । यी दुबै को मिश्रणबाट सकारात्मक दृृष्टिको ण दिन सक्ने मुलुकको सवोर् परी हित अनुकूलको सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । यसरी निर्मित नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गदैर् राज्यको शासन सञ्चालन गनेर् बागडो र निरन्तर चलिरहन्छ ।
ने पालको नीति तथा राजनीतिक अवस् था अध्ययन गर्दा २००७ साल भन्दा अगाडि राणा शासकहरुको एकछत्रीय शासन पद्धतिमा आधारित थियो  । कुनै पनि नीति, ऐ न कानून, नियम लागु ह“ुदै नथ्यो  । के वल राणा शासकहरुको हुकुमका भरमा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो  । न्याय अन्यायका बारे मा आवाजसम्म पनि उठाउन पाइदै नथ्यो  । सामाजिक कार्यस“ग सम्बन्धित न्यायो चित कुरा बो ल्दा पनि जिब्रो काटिमाग्नु पनेर् हो कि भन्ने डर थियो  । ने पाली जनता राणा शासकहरुको क्रुर व्यवहारबाट प्रताडीत थिए ।
ने पालको इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ गते को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात ने पालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ क्रियाशील भयो  । मुलुकले विभिन्न आरो ह अवरो ह पार गदैर् अत्यन्तै लामो ब्यग्र प्रतीक्षाका बाबजुद अन्ततो गत्वा ने पाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घो षणा भयो  । यो संविधान राम्रो स“ग कार्यान्वयन हुन नपाउ“दै राजा महे न्द्रले २०१७ साल पुस २२ गते शाही घो षणामार्फत प्रजातान्त्रिक भनिएको संविधान खारे ज गरे का थिए । दे शको मूल कानून मानिने संविधान नै खारे ज भएको अवस् थामा नीतिगत पद्धतिको विकास हुन सक्ने सवाल नै भएन । मुलुक पुनः पुरानै अवस् थामा धके लियो  ।
निरंकुश शासन प्रणालीलाई मलजल दिदै २०१९ साल पुस १ गते राजा महे न्द्रले ने पालको संविधान २०१९ घो षणा गरे का थिए । यो संविधानले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निमिट्यान्न गदैर् एकतन्त्रीय शासन प्रणालीलाई टे वा दियो  । मुलुकको नीतिगत तथा राजनीतिक विषयको सम्पूर्ण बागडो र राजा महाराजामा निहीत ग¥यो  । नीति निर्माण गनेर् थलो को रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सिंगारिए पनि राजाको इच्छा आकांक्षा बमो जिमका ऐ न कानून बनाइने गरिन्थ्यो  । तथापि निरंकुश पञ्चायती शासन ब्यवस् थाको पनि बिरो ध हुदै आयो  ।
२०४६ सालको जनआन्दो लन उच्च शिखरमा पुग्न सफल भयो  । निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस् थाको अन्त्य भई मुलुकले बहुदलीय शासन व्यवस् था प्राप्त ग¥यो  । दे शको सार्वभौ मसत्ता ने पाली जनतामा निहीत गरिएको ने पाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आयो  । ने पाली कांग्रे सले बहुमत प्राप्त गरी एकमना सरकार गठन भयो  । ने पाली जनताले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न पाउने आशा पलायो  । बिडम्वना भनौ ं तत्कालीन सरकारले नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गर्न सके न राजनीतिले नीतिलाई निदेर् श गर्न पुग्यो  । विश्वको उत्कृष्ट दशवटा संविधानको सूचीभित्र पनेर् भनिएको ने पाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एक पटक पनि संशो धन नभइकन २०६२÷०६३ को आन्दो लनको माध्यमबाट खारे ज गरियो  । सत्रहजार ने पाली जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो  । ने पालको अन्तरिम संविधान २०६३ आयो  । ने कपा माओ वादीले सरकार गठन ग¥यो  । पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भए । अब मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुने भयो भन्ने चर्चा परिचर्चा चल्न थाल्यो  ।
सत्रहजार मानिस मारे र आएको सरकारले नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गर्छ कि भने को त सरकारको तलव खाएर काम गनेर् कामदार प्रधान से नापती रुक्माङ्गत कटवाललाई काम लगाउन नसके र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आफै ले राजीनामा दिएको खबर ने पाली जनता सुन्न बाध्य भए । ने कपा माओ वादीभित्रका अर्का ने ता विद्वान भनिने डा. बाबुराम भट्टराईको ने तृत्वमा पनि सरकार गठन भयो  । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गर्नुको अलवा राजनीतिले नीतिलाई निदेर् श गदैर् कर्मचारी सरुवा बढुवामा आफ्नो पूरै समय खे र फाल्दै असफल प्रधानमन्त्रीको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न सफल भए । मुलुक सञ्चालन गनेर् सवोर् त्कृष्ट सिस् टमको विकास गर्न कसै ले पनि चाहे न । सबै राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना दलगत स् वार्थ मात्र नभएर गुटउपगुट तथा व्यक्तिगत स् वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे को तितो सत्यतालाई नकार्न सकिदै न ।
दो स्रो पटक निर्वाचित संविधानसभाले ने पालको संविधान, २०७२ ल्याउन सफल भएको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा माने र संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपनेर् बे ला आएको छ । जसका लागि नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गनेर् गराउने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुको विकल्प छै न । तसर्थ अब ढिला नगरिकन नीतिले राजनीतिलाई निदेर् श गनेर् पद्धतिको विकास गर्न सबै राजनीतिक दल एकमत भएर लाग्नुपनेर् बे ला आयो भन्दा अत्युक्ति नहो ला ।
Previous: त्रिभुजीय शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ
Next: लायक, नालायक नायक !